सिड्नीमा पत्रकारको भेला ; प्रवासमा पत्रकारिता भन्दा मित्रकारीताको बढी अभ्यास ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
सिड्नीमा पत्रकारको भेला ; प्रवासमा पत्रकारिता भन्दा मित्रकारीताको बढी अभ्यास ?
प्रकाशित: २०७४ माघ २६ गते १५:२१
सिड्नी – अस्ट्रेलियालाई कर्मथलो बनाएर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारले नेपालबाट आएका केही अग्रज पत्रकारको उपस्थितिमा प्रवासको पत्रकारिताको अवसर र चुनौतीका विषयमा छलफल चलाएका छन्। नेपालबाट आएका देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक कबिर राणा तथा एनआरएनका अगुवाको उपस्थितिमा सम्पन्न अन्तरक्रियामा प्रवासका पत्रकारिताभन्दा मित्रकारीताको अभ्यास देखिएको सहभागिले स्वीकारे।
एनआरएनका पूर्व युवा संयोजक विजय पोखरेलले बिगतमा भन्दा वर्तमानको अवस्था हेरी गलतलाई गलत राम्रो कामलाई प्रोत्साहन दिने मिडियाको भूमिका हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा एनआरएनका उपाध्यक्ष नन्द गुरूङले समाजभित्रका गतिविधीलाई पस्केर आपसमा एकतामा बाध्ने काम मिडियाले गर्नुपर्ने सुनाए।
अन्तर्राष्ट्र्रिय झापाली समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेश पोखरेलले अस्ट्रेलियामा पछिल्लो परिदृष्यमा पत्रकारिताको महत्व बढेको र यसले आफ्नो भूमिका फराकिलो पार्दै लगेको बताए। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार भट्टराईले एफएम रेडियोहरू अहिले जिम्मेबार हुँदै गएको र राज्यले पनि यसमा नियमन गरिरहेको सुनाए।
कार्यक्रममा नेपालबाट आएका राणा, भट्टराई र अनलाइन संघका महासचिव अमृत पन्थीलगायतलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।